Thai Pot I | MyLann – Online Restaurants Directory and Food Reviews in Myanmar
Food : 3.5 Decoration :2Service : 2.17
No. 250 အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း
Activities on Thai Pot I
gineal like Thai Pot I4years ago
mmfoodie like Thai Pot I4years ago
Myat Noe Khin reviewed Thai Pot I4years ago
Ye Naung Kham reviewed Thai Pot I4years ago
One of my favourite dinner place !!!! Price is cool. Unlimited bacon, squid, octopus ... XoXo !
Dennis Nsh reviewed Thai Pot I4years ago
​ဈေးနှန်း​ရော အရသာ​ရော ခြုံ​ပြောရရင်​ ​တော်​​တော်​ အဆင်​​ပြေတယ့်​ ဆိုင်​​လေးပါ
May Kyaw like Thai Pot I4years ago
Khine Lin like Thai Pot I4years ago
Ye Naung Kham uploadedaphoto at Thai Pot I4years ago
Ye Naung Kham is eating at Thai Pot I4years ago
Ŝü Xoxóinnêr Ärmý reviewed Thai Pot I4years ago
အစားအသောက်ကအရသာရှိပေမဲ့ လူများလာတဲ့ခါ အညော်တွေနဲ့ ဆိုင်ထဲမှာပြည့်နေပါတယ် တစ်ခုံနဲ့ တစ်ခုံအရမ်းကပ်နေလို့လို့ထင်ပါတယ် နောက်ကျမှဆိုလည်း parking ခက်ခဲပါတယ် ဈေးနှုန်းကတော့ တကယ်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင် :)
Pop Corn reviewed Thai Pot I4years ago
နေရာထိုင်ခင်းက စပြောချင်ပါတယ်။ စားပွဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက သိပ်နီးကပ်နေပြီး လေဝင်လေထွက် နည်းတဲ့အတွက် မီးခိုးငွေ့နဲ့ အညှော်နံ့တွေဟာ စားသောက်သူတွေအတွက် တော်တော်စိတ်ဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ အသားတွေဟာဆိုရင် ထူထဲတဲ့အတွက် မီးကင်ရာမှာ တော်တော်နဲ့မကျက်နိုင်သလို ဝါးရတာလည်း မလွယ်လှပါဘူး။ ဟိုအရင်ကတော့ အအေးကိုစိတ်ကြိုက်သောက်လို့ရပေမယ့် ခုတော့ အအေးကို မပေးထားတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒိအခါကျတော့ စားသုံးသူတွေအတွက် ပိုက်ဆံထပ်ကုန်ပါတယ်။ အရသာက သိပ်အဆိုးကြီးမဟုတ်ပေမယ့် တခြားဆိုင်နဲ့ယှဉ်စားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ သိသိသာသာကွာခြားနေပါတယ်။
Writeareview for Thai Pot I
Report for Thai Pot I
Reserve table at Thai Pot I